၂၀၁၂-၂၀၁၃ တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုသူ ၁၅၀၀၀ ခန့် ပျက်ကွက်
အောက်မြန်မာပြည်တွင် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ နှစ်အတွက် တက္ကသိုလ် ၀င်တန်း ဖြေဆိုသူ စာရင်းရှိ ဦးရေ ၁၅၅၇၉၀တွင် လာရောက်မ ဖြေသူ ၁၅၀၀၀ ကျော်ခန့်ရှိကြောင်းအမှတ်(၁) အခြေခံပညာ ဦးစီး ဌာန အောက်မြန်မာပြည်မှ သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့လာရောက် မဖြေဆိုသူများတွင် ဇီဝဗေဒဘာသာတွဲတွင် စာရင်းရှိ ၃၁၃၅၁တွင် ပျက်ကွက်သူ ၁၉၁၆ ဦး၊ ဘောဂဗေဒ ဘာသာ တွဲတွင် စာရင်းရှိ ၁၂၄၂၉၀ တွင်ပျက်ကွက်သူ ၁၂၀၉၂ ဦးရှိပြီး ဝိဇ္ဇာတွဲ ဖြေဆိုရန် ပျက်ကွက်သူ ၂၁၁၂ဦးရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
At 3/22/2013 10:18:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံနေ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များ လုံခြုံရေးအတွက် သမ္မတထံ တိုင်ကြား
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းတွင် နေထိုင်သော အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များ၏ အသက် အိုးအိမ် လုံခြုံမှုနှင့် စိုးရိမ်သောကများ ကင်းဝေးစေရန် အတွက် တရား ဥပဒေ၏ အကာအကွယ် ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်စည်းပေးစေ လိုကြောင်း မြန်မာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့က မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့နေ့စွဲဖြင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတထံတိုင်ကြားစာ ပေးပို့ထား ခဲ့ သည်ဟုသိရ သည်။
At 3/22/2013 10:15:00 PM No comments:
ကရင်ပြည်နယ်ရှိ လယ်သမားများကို လယ်ယာလုပ်ခွင့် ရရှိရန် ပြန်လည်လျှောက်ခွင့်ပြု
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လယ်သမားများအနေဖြင့် မိမိပိုင် လယ်ယာမြေ များကို ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် ယခုနှစ် ဆန်းပိုင်းမှ စ၍ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများသို့ လျှောက်လွှာများ သွားရောက်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းလျှောက်လွှာများကို ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများထံ တဆင့်ပြီးတဆင့် လျှောက်ထားကြခဲ့ရာ
At 3/22/2013 09:46:00 PM No comments:
မိတ္ထီလာမြို့၌ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ယနေ့အထိ သေဆုံးသူ (၁၁)ဦး၊ ဒဏ်ရာရသူ (၃၉) ဦးရှိ မတ်လ (၂၂) ရက်မှစ၍ မိတ္ထီလာခရိုင်၌ အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထား ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများ ကျယ်ပြန့်မလာအောင် ပြည်သူများက တာဝန်ရှိသူများနှင့် အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် မေတ္တာရပ်ခံထား
မန္တလေးတိုင်းဒေကြီး မိတ္ထီလာမြို့၌ ဖြစ်ပွားသည့် ဆူပူအကြမ်း ဖက်မှုကြောင့် ယနေ့ ညနေပိုင်းအထိရရှိသော သတင်းများအရ စုစုပေါင်း သေဆုံးသူ (၁၁) ဦး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူ (၃၉) ဦးရှိကြောင်း၊ ပဋိပက္ခကြောင့် ပျက်စီးမှု အနေဖြင့် နေအိမ် (၁၅၂) လုံး၊ မော်တော်ယာဉ် (၂) စီး၊ ပညာရေးမှူးရုံး (၁)လုံး၊ ဆိုင်ကယ် (၁) စီး၊ သုံးဘီးဆိုင်ကယ် (၂) စီး၊ ဘာသာရေး အဆောက်အအုံ (၁၃) လုံးရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
At 3/22/2013 09:30:00 PM No comments:
မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍
မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ်
မိထ္တီလာမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်း အထိ သေဆုံးသူ ၁၁ ဦးရှိပြီး ဒဏ်ရာရရှိသူ ၃၉ ဦးရှိကြောင်းနှင့် ပဋိပက္ခကြောင့် ပျက်ဆီးမှုအနေဖြင့် နေအိမ်
At 3/22/2013 08:55:00 PM No comments:
မိတ္ထီလာ အဓိကရုဏ်းကို ဖြေရှင်းဖို့ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုးနဲ့ လပခတိုင်းမှူးကို တာဝန်ပေး
မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ မှစတင်ကာ ယနေ့ မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့အထိ အဓိကရုဏ်းတွေ အဓိကဖြစ်ပွားနေတဲ့ မိတ္ထီလာခရိုင်အတွင်းက မိတ္ထီလာမြို့အပါအဝင် အနီးဆုံးမြို့တွေဖြစ်တဲ့ မလှိုင်၊ သာစည်၊ ဝမ်းတွင်းမြို့တွေမှာ အင်းတကော် အခြေစိုက် တပ်မ ၇၇ စစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းသုံးရင်းကို အသုံးပြုပြီး အခြေ အနေတွေ ငြိမ်သက်အောင် ထိန်းသိမ်းမယ်လို့ RFA က စုံစမ်းသိရပါတယ်။
At 3/22/2013 07:44:00 PM No comments:
အစ္စရေး နိုင်ငံသို့ အမေရိကန် သမ္မတ ရောက်ရှိနေစဉ် ဟားမတ်စ် စစ်သွေးကြွ များက ဒုံးကျည်ဖြင့် ပစ်ခတ်
အမေရိကန် သမ္မတဘားရတ်အိုဘားမား၏ အစ္စရေး နိုင်ငံခရီးစဉ် ဒုတိယ မြောက်နေ့တွင် ဂါဇာ ကမ်းမြောင်ဒေသရှိ ဟားမတ်စ် စစ်သွေးကြွ များက အစ္စရေးနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းသို့ မတ် ၂၁ ရက်တွင် ဒုံး ကျည်လေး စင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာ ဒုံးကျည်တစ်စင်းမှာ ဆဒီရော့တ် နယ်စပ်မြို့ရှိ အိမ်တစ်အိမ်၏ ခြံဝင်းအတွင်း ကျရောက် ပေါက်ကွဲ ခဲ့သောကြောင့် နေ အိမ် ပျက်စီးသွားပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသူမရှိကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ၏ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ မစ်ကီရို စန်ဖယ်တ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
At 3/22/2013 07:42:00 PM No comments:
သမ္မတ အမိန့်ထမ်းဆောင်ရန် တပ်မတော် အသင့်ဖြစ်
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာချက်ပါ အချက် များကိုဆောင်ရွက်ရန် အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း၊ တပ်ဖွဲ့များက အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားနေသည့် မိတ္ထီလာမြို့နှင့် အခြားမြို့များ၏ လုံခြုံရေး အခြေအနေများကို ထိန်းသိမ်းရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှ အရာရှိ တစ်ဦးက RFA သို့ ညနေ ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် အတည်ပြု ပြောကြား သည်။
ဓာတ်ပုံ - Eleven Media Group
At 3/22/2013 07:39:00 PM No comments:
Google ဒိုမိန်းအသစ်မြန်မာအချက်အလက်အဓိက ရှာဖွေရန်ရည်ရွယ်
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဂူးဂဲလ် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်Mr. Eric Schmidt မကြာမီ တစ်ရက်အလို မှစတင် အသုံးပြုခွင့် ရခဲ့သည့် Google.com.mm ဒိုမိန်းမှာ မြန်မာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များအား အဓိက ထား ရှာဖွေပေးနိုင်မည်ဟု ဂူးဂဲလ် ကုမ္ပဏီပြန်ကြားေ ရးနှင့် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေး ဌာနမှMs. Ammy ကပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင် အသင်းမှ တာဝန်ရှိသူ ဦးဇော်ထွဋ်က ''အရင်က ရိုးရိုး .com သုံးပြီး ဂူးဂဲလ်မှာ တစ်ခုခုရှာမယ်ဆိုရင် ကိုယ် ရှာချင်တဲ့ ပြည်တွင်းကအရာက မရင်မတက်ဘူး။.mm နဲ့ ရှာမယ် ဆိုရင် မြန်မာပြည်တွင်း အချက်အလက်ကို သူက ဦးစားပေးပြမယ်'' ဟု အသုံးပြုနိုင်ပုံနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြော သည်။
At 3/22/2013 04:20:00 PM No comments:
ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သောအမိန့်အမှတ် (၁/၂၀၁၃)
At 3/22/2013 04:13:00 PM No comments:
မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီ ၃၀ မိနစ်
မိတ္ထီလာမြို့ ဈေးကုန်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ပိတ်မိနေသော AFP, Messenger, RFA အစရှိသည့် သတင်းထောက်(၉)ဦးအား မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး၏
At 3/22/2013 03:59:00 PM No comments:
မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ်
မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာ စာနယ်ဇင်းသမဂ္ဂမှ မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် သဘောထား ထုတ်ပြန် လိုက်ပါသည်။
At 3/22/2013 03:49:00 PM No comments:
မိတ္ထီလာ ပဋိပက္ခအရေး ကုလသမဂ္ဂ ကြေညာချက် ထုတ်
မိတ္ထီလာမြို့တွင် မတည်မငြိမ် ဖြစ်ပေါ်နေမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဌာနေ ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ အာရွှတ် နီဂမ်က ကြေညာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
At 3/22/2013 03:23:00 PM No comments:
မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများကြောင့် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများ အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန် နီးစပ်ရာစာစစ်ဌာနများတွင်ပြောင်းလဲဖြေဆိုခွင့်ပြုခဲ့
မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ပဋိပက္ခများကြောင့် မိတ္ထီလာမြို့နယ်အတွင်း တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုနေသူများ အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေရန်အတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများအား မိမိတို့နှင့် နီးစပ်ရာ စာစစ်ဌာနများတွင် ပြောင်းရွှေ့ ဖြေဆိုခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
At 3/22/2013 03:20:00 PM No comments:
NLD တွင်နေရာမရလိုက်သူများအတွက် စိတ်မကောင်းကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
NLD တွင် အနှစ် ၂၀ခန့်တာဝန်ထမ်းဆောင်လာခဲ့ပြီး နေရာ မရခဲ့ သူများအတွက် စိတ်မကောင်းကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
" NLD မှာ အနှစ် ၂၀ လောက်လုပ် လာပြီး နေရာမရလိုက်တဲ့ သူတွေ အတွက် စိတ်မကောက်းပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ သစ္စာရှိမှုကို အသိအမှတ်ပြု ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သစ္စာရှိတိုင်း လုပ်ရည်ကိုင်ရည်နဲ့ တခြားစီပါပဲ။
At 3/22/2013 03:15:00 PM No comments:
ဂျပန်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စားနပ်ရိက္ခာ အထောက်အပံ့အဖြစ် ယန်းငွေ ၂ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၂၁ သန်း) ကို ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့ စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ် (WFP) မှတဆင့် လှူဒါန်းကြောင်း သိရသည်။ သံအမတ်ကြီး မီကီအို နုမာတာ က နေပြည်တော်တွင် WFP သို့ လှူဒါန်းခြင်း ဖြစ်သည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် စကတ်အတိုအပြတ်များမ၀တ်ဆင်ရ ဥပဒေထုတ်ပြန်...
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် မတ်လ(၂၂)ရက်နေ့မှ စတင်ကာ စကတ် အတို အပြတ်များအား ၀တ်ဆင်ခွင့်မပြုတော့သော ဥပဒေ ကို ပြဋ္ဌာန်း လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ယခုအခါ၌ ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ နာမည်ကျော် အနုပညာရှင်များသည် သရုပ်ပျက်လောက်သော စကတ်အတိုများကို ၀တ်ဆင်လာသဖြင့် အမြင်မတင့်တယ်မှုများကို ကြုံတွေ့နေရသဖြင့် ၎င်းဥပဒေအားပြဋ္ဌာန်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ထိုဥပဒေ အား ဖောက်ဖျက်ပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၄၅)ဒေါ်လာ ဒဏ်ငွေပေးဆောင် ရန် ပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်း သိရသည်။
At 3/22/2013 02:25:00 PM No comments:
မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဆူပူနေသူများကို ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းရန် အမိန့်မထုတ်သေး
မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့မှစတင်ကာ ယနေ့ မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့အထိ မိတ္ထီလာမြို့မှာ ဆူပူအကြမ်းဖက်နေတဲ့ သင်္ကန်းဝတ်ပါ လူအုပ်တွေကို ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းဖို့ကို ယခုအချိန်ထိ မိတ္ထီလာ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့က အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ ယင်းဒေသမှာ လုံခြုံရေး တာဝန်ယူနေတဲ့ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက RFA ကို ဒီကနေ့ မနက်က အတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။
At 3/22/2013 02:23:00 PM No comments:
ပန်းသီး စားခါနီးရင် သတိထားပါ
ပန်းသီး အခွံတွေပါ စားတတ်တဲ့ သူတွေအဖို့ သတိထား ရမယ့် အချက် ဖြစ်ပါတယ် ပန်းသီးတွေရဲ့အခွံကို ဖယောင်းတွေ သုတ်ထားလေ့ရှိတယ် ဒါကြောင့် ဘယ် အသီးပဲစားစားမစားခင် အရင် စစ်ဆေးကြည့်ပါ ။
ဖယောင်းကို အအေး ခံနိုင်အောင်နဲ့ Preservation ( တာ ရှည်ခံ နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ) အနေနဲ့ အသုံးပြု ကြပါတယ် ။
အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ သိပ်မသိ သာ ပေမယ့် အနောက်နိုင်ငံ တွေမှာ တစ်နှစ်ထက် ခံအောင်ဆိုပြီး အသီးတွေကို ဒီလိုနည်းတွေနဲ့ အသုံးပြု
At 3/22/2013 01:55:00 PM No comments:
မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၂၀ မိနစ်
မိထ္ထီလာမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် သေဆုံးသူ (၅) ဦး ထပ်မံ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာ ရရှိသူ အရေ အတွက်မှာလည်း စုစုပေါင်း(၄၅) ဦးအထိ ရှိလာကြောင်း မိထ္ထီလာမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံမှ အမည်မဖော်လိုသူ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက Eleven Media Group သို့ အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
At 3/22/2013 01:47:00 PM No comments:
မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်
မိထ္ထီလာမြို့၏ လက်ရှိ အခြေအနေသည် မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု အခြေအနေမှ ဖောက်ထွင်း လုယက်မှုများ လုပ်ဆောင်သည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း မိထ္ထီလာမြို့ရှိ အမည်မဖော်လိုသူ လုံခြုံရေး အရာရှိတစ်ဦးက Eleven Media Group သို့ အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
At 3/22/2013 01:24:00 PM No comments:
မိတ္ထီလာခရိုင်အတွင်းလက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေသော ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း ဖြစ်စဉ်များနှင့်ဆက်စပ်၍ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း လတ်တလော ထွက်ပေါ်နေသော သတင်းများမှာ ကောလာဟလများ သာဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း မိတ္ထီလာခရိုင်မှ အဓိကရုဏ်းအသွင်များ ကူးစက်မှုမရှိစေရန် ကြိုတင်စီမံ ထားကာ လုံခြုံရေး အင်အားကို တိုးမြှင့်ချထားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒုတိယတိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူးကြီး သက်လွင်က ပြောသည်။
At 3/22/2013 01:19:00 PM No comments:
မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ
မိထ္ထီလာ-ကျောက်ပန်းတောင်းလမ်း ကျောင်းပန်းတောင်ဘက်က ၀င်လာသူများ အားလုံးကို ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀င်များမှ စစ်ဆေးလျက်ရှိပြီး တုတ်၊ ဓားလက်နက်ကိုင်ဆောင် လာသူမှန်သမျှကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှု များ ပြုလုပ်နေကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင် သဲတော - ၀မ်းတွင်း ဘက်တွင်လည်း လမ်းပေါ်တွင် သွားလာလှုပ်ရှားနေသူ အားလုံးမှာ တုတ်၊ ဓားလက်နက် ကိုင်ဆောင်ပြီး သွားလာနေကြောင်း မိထ္ထီလာမြို့သို့ ထပ်မံ ရောက်ရှိသွားသော Eleven Media Group သတင်းထောက်ကပြောပါသည်။
At 3/22/2013 12:33:00 PM No comments:
၈၈ မျိုးဆက်မင်းကိုနိုင်နှင့် အန်အယ်လ်ဒီ အမတ် ဦးဝင်းထိန် တို့၏ စည်းကမ်းမဲ့ ပုတ်ခတ်ပြောဆိုမှုများအား တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ ဒေါသထွက်
မိထ္ထီလာ အဓိကရုဏ်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား မင်းကိုနိုင်နှင့် အန်အယ်လ်ဒီအမတ် ဦးဝင်းထိန်တို့၏ လက်လွတ် စပယ် စွပ်စွဲ ပုတ်ခတ် ပြောဆိုမှုတွေကြောင့် တပ်မတော်မှ အရာရှိ ကြီးများပြင်းထန် စွာ ဒေါသထွက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
At 3/22/2013 12:30:00 PM 1 comment:
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း တရားဝင်ဆန္ဒပြရန် ခွင့်ပြုလိုက်ပြီ
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကို တရားဝင် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြ ရန်တင်ပြမှုကို မတ်လ (၂၁) ရက်နေ့တွင် ဆားလင်းကြီးမြို့ နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးမှ ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း လက်ပံတောင်း သို့ရောက် ရှိနေသော Hot News သတင်းထောက်မှ သတင်းပေး ပို့ သည်။
တုံရွာသူ မဌေးဦး နှင့် မဌေးနွယ်တို့ က ဦးဆောင်ကာ မတ်လ (၁၈) ရက်နေ့တွင် စာဖြင့်တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၊ ၃ ရက်အကြာတွင် ယခုကဲ့သို့ ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
At 3/22/2013 12:22:00 PM No comments:
မိထ္တီလာမြို့လယ် ဈေးဆိုင်ခန်းများနှင့် အဆောက်အအုံများ မီးလောင်
မနက် ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ်
မိထ္တီလာမြို့လယ်ဈေးပတ်လမ်းနား၊ နာရီစင်အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဈေးဆိုင်ခန်းများ၊ အဆောက်အအုံများ မီးလောင်ကျွမ်းနေပြီး အာဏာပိုင်များက မီးကို ကြိုးစားငြိမ်းသတ်နေရကြောင်း ဧရာဝတီသတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
At 3/22/2013 10:35:00 AM No comments:
UEFA အား သူရဲဘောကြောင်လွန်းကြောင်း ဗန်ပါစီ ဝေဖန်
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူး ရော်ဘင် ဗန်ပါစီက UEFAသည် အမှန်ကို ထုတ်မပြောရဲသည့် သူရဲဘောကြောင်သူ များဟု ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ဝေဖန်လိုက်သည်။
ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်တွင် အငြင်းပွားဖွယ်အခြေအနေဖြင့် မန်ယူ အသင်း တောင်ပံလူ လူးဝစ်နာနီ ထုတ်ပယ်ခံရသော ကိစ္စတွင် UEFAက ဒိုင်လူကြီးဘက်မှ အကာအကွယ်ပေးခဲ့ခြင်းအပေါ်၌ နယ်သာလန် လက်ရွေးစင် ကစားသမားက မကျေမနပ် ဖြစ်နေသည်။ မန်ယူသည်
At 3/22/2013 10:29:00 AM No comments:
Google အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ အဲရစ်ရှမစ် ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိ၊ ပြည်တွင်းအိုင်တီ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အိုင်တီဝါသနာရှင်များနှင့် MICT Park ၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေ
Google ၏ အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ အဲရစ်ရှမစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ မတ်လ ၂၂ ရက်(ယနေ့) နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဲရစ်ရှမစ်သည် ၄င်း၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း ပထမဆုံး အဖြစ် အိုင်တီနယ်ပယ်မှ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ပညာရှင်များ၊ အိုင်တီဝါသနာ ရှင်များနှင့် MICTDC ရှိ Conference Hall တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ တစ်ရပ်ကို မတ်လ ၂၂ ရက်(ယနေ့) နံနက် ၉နာရီ ခွဲခန့်တွင် စတင်ပြု လုပ်လျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲသို့ အခြားနယ်ပယ်အသီးသီးမှ စိတ်ပါဝင်စား သူများလည်း တက်ရောက်လေ့လာ နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
At 3/22/2013 10:22:00 AM No comments:
At 3/22/2013 10:19:00 AM No comments:
မိတ္ထီလာ အရေးအခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၈၈ တို့၏ ကြေငြာချက်အပေါ် သုံးသပ်မိသမျှ
ဒီရက်ပိုင်း သတင်းစုံလင် ဖေ့စ်ဘုတ် တစ်ခွင် ကတော့ ပြော မဆုံးပေါင် တောသုံးထောင် ဆိုသလိုဘဲတစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး ဆက်တိုက်
ဆို သလို စိတ်မချမ်းမြေ့စရာ သတင်းတွေနဲ့ ပြည့်နှက်လို့ နေပါတော့ တယ်။
၇၈၆ / ၉၆၉ မှသည် လက်ပံတောင်း ဆန္ဒပြမှု ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို အချီကြီးဆော်မယ်ဆိုပြီး တစ်ပွဲတိုးပွန်း (နယ်) ရုပ်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့ ဟန်ဝင်းအောင် ၊ သွဲ့သွဲ့ဝင်းတို့ကို ထုတ်သုံး
At 3/22/2013 10:02:00 AM No comments:
မတ်လ ၂၂ ရက် နံနက် ၉ နာရီ
မိထ္ထီလာမြို့၏ မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း အခြေအနေမှာ သီရိမင်္ဂလာရပ်ကွက်ရှိ ကားကြီးဝင်းအနီးတွင် မီးလောင်မှု အချို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
At 3/22/2013 09:54:00 AM No comments:
ကာမိုင်းရဲစခန်းအား တိုက်ခိုက်ခဲ့သူအား ပြင်းထန်စွာအရေးယူတော့မည်
လိုင်ဇာရှိ KIA ဌာနချုပ်အနေဖြင့် KIAတပ်ရင်း(၆)မှတပ်ရင်းမှူး အင်ခွန်ဇော်ဒွဲအား ကာမိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းငယ် လေးအား အင်အားသုံးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ပတ် သက်၍ အရေးယူရန်စီစဉ်နေပါသည်။
အင်ခွန်ဇော်ဒွဲအား KIA ဗဟိုမှ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများအား တိုက်ခိုက်ရန်သာ အမိန့်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကာမိုင်းရဲစခန်းအား တိုက်ခိုက်ရန် အမိန့်ပေးထားခြင်း မရှိကြောင်း လိုင်ဇာဌာနချုပ်မှ ဖြေရှင်းချက်ထုတ်ပြန်ထားသည်။ အင်ခွန်ဇော်ဒွဲ အနေဖြင့်ခိုင်းတာတစ်ခြား၊လုပ်ဆောင်တာတစ်ခြား ဖြစ်နေသည့်အတွက် လိုင်ဇာ ဌာနချုပ်သို့ ခေါ်ဆောင်ထားခဲ့သည်။
At 3/22/2013 09:34:00 AM No comments:
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်၊ လော့အိမ်ဂျလစ်မြို့ က မြို့ လယ်ခေါင် ကားလမ်း မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။
မိုးပျံကားလမ်း၊ တံတားများနဲ့ ရှုပ်ထွေးနေပေမယ့် ယာဉ်လမ်းကြော ပိတ်ဆို \_့မှု မရှိပါဘူး။ သူ့လမ်းကြောနဲ့သူ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ယာဉ်မောင်း မိုင်နှုန်း ကို ပုံသေ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အဲ့ထက်ပိုမောင်းမယ် သို့မဟုတ် လျော့မောင်း မယ်ဆိုရင် လမ်းဒေသတွင်း CCTV ကင်မရာ နဲ့ ဂြိုလ်တု ကင်မရာက Track လုပ်ပြီး ယာဉ်စည်းကမ်း ထိန်းသိန်းရေး Admin Server ကိုလှမ်း အကြောင်းကြားပါတယ်။
At 3/22/2013 09:29:00 AM No comments:
နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းဘဝ သမိုင်းကြောင်း ကောင်းအောင် ကြိုးစားကြ
တာဝန် ကျေပွန်မှုနှင့် သစ္စာ စောင့်သိမှုသည် လုပ်ငန်းတစ်ခု အောင်မြင်ရေး အတွက် လိုအပ်ချက် နှစ် ရပ်ဖြစ် သည်။ လူတိုင်းလူတိုင်းသည် လောကီနယ်ပယ်၌သော်လည်းကောင်း၊ လောကုတ္တရာ နယ်ပယ်၌သော် လည်းကောင်း တာဝန်ကိုယ်စီ ရှိကြသည်။
At 3/22/2013 09:05:00 AM No comments:
ကမ္ဘာ့ အလှဆုံး အမျိုးသမီး ၅ဝ ဦး စာရင်းတွင် တရုတ် မင်းသမီးချော ကျန်းကျိယီ ပါဝင်
ငယ်စဉ်ကတည်းက အနုပညာကို ဝါသနာပါပြီး အာရှမှာ သာမက ကမ္ဘာ မှာပါ အောင်မြင်မှုများစွာကို သိမ်းပိုက်ထားသည့် တရုတ်မင်းသမီးချော ကျန်းကျိယီသည် Los Angeles Timesမဂ္ဂဇင်းက ရွေးချယ်သော ကမ္ဘာ့ အလှဆုံး အမျိုးသမီး ၅ဝ ဦးစာရင်းတွင် ဖော်ပြခံရကြောင်း သိရသည်။
At 3/22/2013 08:08:00 AM No comments:
မတ်လ ၂၂ ရက် နံနက် ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်
မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မတ်လ ၂၂ ရက် နံနက် ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ် အချိန်ကEleven Media Group မှ မိတ္ထီလာမြို့ အမှတ် (၂) ရဲစခန်းအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ တာဝန် ရှိသူ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက"လက်ရှိအချိန်မှာ အခြေအနေက တည်ငြိမ်အေးချမ်း နေ ပါတယ်။ ဒေသ ခံတွေ
At 3/22/2013 08:03:00 AM No comments:
နောက်တယ်ထင်နေတာ၊ Daily mail နဲ့ nbc တို့လို သတင်းဌာန ကြီးတွေက တောင် အတိအလင်းရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ ရုရှား အစိုးရအဖွဲ့ကလည်း မဖုံးကွယ်ပဲ တရားဝင်ကြေညာပါတယ်။
တကယ်ပဲ လူကို သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင် လိုပြောင်းလဲသွားစေ မယ့် ကြောက် မက်ဖွယ် လက်နက်ကို ရုရှားတို့ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။ စတင်ကြေညာတုန်းက ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လကဖြစ်ပြီး ယခုဆိုရင် တစ်နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ သေနတ်ရဲ့  အလုပ်လုပ်ပုံက ဒီလို ဖြစ်ပါတယ်။
At 3/22/2013 07:59:00 AM No comments: